United ụgbọ elu na-agbakwunye ụgbọ elu ndị Croatia, Gris na Iceland ọhụrụ ka mba mepere emepe maka ndị njem ọgwụ mgbochi
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Airlines » United ụgbọ elu na-agbakwunye ụgbọ elu ndị Croatia, Gris na Iceland ọhụrụ ka mba mepere emepe maka ndị njem ọgwụ mgbochi
Airlines • Airport • Aviation • Na -agbasa Akụkọ Europe • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Croatia na -agbasa ozi ọma • Akụkọ na -agbasa na Greece • Akụkọ kacha ọhụrụ na Iceland • News • Iwughachi • Ịrụ ọrụ • Tourism • Okwu Nlegharị Anya • Transportation • Ihe nzuzo Njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akwụkwọ akụkọ USA • Akụkọ dị iche iche
United na-enye ndị njem nhọrọ ndị ọzọ maka njem oge ọkọchị site na ịgbaga kpọmkwem na mba ndị na-amalite ịmaliteghachi na ndị ọbịa na-agba ọgwụ mgbochi
Malite na July, United ga-enye ụgbọ elu ọhụụ ọhụụ si Newark Liberty International Airport ruo Dubrovnik, Croatia
Malite na July, United ga-enye ụgbọ elu ọhụrụ si Washington Dulles International Airport ruo Athens, Greece
Malite na July, United ga-enye ụgbọ elu ọhụụ ọhụụ si Chicago O'Hare International Airport ruo Reykjavik, Iceland
United Airlines na-agbakwunye ụgbọ elu ọhụrụ atọ na netwọkụ mba ya, na-enye ndị njem nhọrọ ndị ọzọ maka njem oge ọkọchị site na iji ụgbọelu na-aga kpọmkwem na mba ndị na-amalite ịmaliteghachi ndị ọbịa gbara ọgwụ mgbochi. Malite na July, United Airlines ga-enye ụgbọ elu ụgbọ elu ọhụrụ si Newark Liberty International Airport na Dubrovnik, Croatia, site na Washington Dulles International Airport ruo Athens, Gris na site na Chicago O'Hare International Airport ruo Reykjavik, Iceland, ndị niile dabere na nnabata gọọmentị.
'Slọ Ọrụ Na-ahụ Maka Njem njem nke United na-enyere ndị ahịa aka bulite akwụkwọ nyocha na ọgwụ mgbochi COVID-19 ha, ma kwenye ya tupu ha abanye ka ndị ahịa wee nwee ike ịbanye njem ha tupu ha abanye n'ọdụ ụgbọ elu. United bụ naanị ụgbọ elu na-eme nke a n'enweghị nsogbu na ngwa mkpanaka nke ụgbọelu.
Mgbakwunye nke ụzọ ndị a gosipụtara mmụba na mmasị n'etiti ndị ahịa United: n'ọnwa gara aga, ọchụchọ na United.com maka ụgbọ elu na Croatia, Gris na Iceland dị 61%. Ndị ahịa nwere ike ịgba akwụkwọ njem malite taa na United.com na ngwa mkpanaka United.
Patrick Quayle, osote onye isi nke netwọkụ na njikọ na njikọta kwuru, sị: "Ka mba ụwa gbaa gburugburu na-amalite usoro imeghe, ndị njem na-atụrụ ndụ na-achọsi ụzọ mgbapụ nọ na-eche ogologo oge maka njem mba ụwa ọhụụ." Zọ atọ ndị a na-emeghere ndị ọbịa anyị ọmarịcha mma dị n'èzí. Ha bụkwa ihe atụ kachasị ọhụrụ nke otu United si agbachi iji wughachi netwọkụ anyị. ”
United na-ezube ịtinye naanị ọrụ na-enweghị nkwụsị n'etiti US na Croatia na July 8, yana ọrụ na Dubrovnik na Croatia Dalmatian Coast. Linegbọ elu ahụ ga-arụ ọrụ ụgbọ elu izu atọ n'etiti Newark na Dubrovnik ruo Ọktọba 3 na Boeing 767-300ER na oche oche 30 United Polaris. Gbọ elu ga-arụ ọrụ na Mọnde, Tọzdee, na Satọdee site na Newark na Tuesday, Fraịdee, na Sọnde site na Dubrovnik, ha ga-ejikwa oge jikọọ na Newark ruo ihe karịrị obodo 65 na North America.